၂ဝ၅ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု သုညရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချနိုင်ရေး ဒေါ်လာ ၅ ထရီလီယံတန် စီ? - Yangon Media Group
၂ဝ၅ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု သုညရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချနိုင်ရေး ဒေါ်လာ ၅ ထရီလီယံတန် စီ?
ဝါရှင်တန်၊ ဇွန် ၄
အမေရိကန်ဒီမိုကရက်ပါတီ မှ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် သမ္မတဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျိုးဘိုင်ဒင်က ဒေါ်လာ ၅ ထရီလီယံတန် ရာသီဥတု စီမံကိန်းတစ်ရပ်အား တင်ပြခဲ့ပြီး၊ ယင်းအရသက္ကရာဇ် ၂ဝ၅ဝ ပြည့် နှစ်တွင် ကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့လျှော့ချသည့် အစီအစဉ်သည် သုညရာခိုင် နှုန်း ထုတ်လွှတ်မှုရှိစေမည်ဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ယင်း အစီအစဉ်ကို ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲစေနိုင်မှုအတွက် ပါဝင်နိုင်စေရန် မိမိဦးဆောင်သွားမည် ဟုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြား လိုက်သည်ဟု ဇွန် ၄ ရက်သတင်း များအရ သိရှိရသည်။
ယခင်အမေ ရိကန် ဒုတိယသမ္မတဟောင်း အသက် (၇၆)နှစ်ရှိ ဂျိုးဘိုင်ဒင်၏ ယင်းအစီအစဉ်အရ ဆယ်နှစ်စီမံကိန်းအတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ငွေကြေးအပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ကာ ရုပ်ြ<ွကင်းလောင်စာများ သုံးစွဲခြင်းမှ ကင်းလွတ်ကာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု သုညရာခိုင်နှုန်းရှိစေ ရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကယ်တင်ဖို့ သိပ္ပံနည်းပညာ တွေရှိပါတယ်။ ရှာဖွေသုံးစွဲနိုင်ဖို့ကိုပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနယ်ပယ်မှာပဲ အမေရိကန်က ဦးဆောင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဇွန် ၄ ရက်က ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် သမ္မတလောင်းယှဉ်ပြိုင်ရေးနှင့် မဆိုင်ဘဲ အလွတ်သဘောမျိုး ဟောပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယ သမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒင်သည် သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်ကလည်း ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးအနေ ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာကိစ္စရပ် များ၊ Clean & Green Energy) အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်း သောက် ရေချိုများ ဝဝလင်လင်သုံးစွဲနိုင်ရေး ကို ထူးခြားစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ လည်း ဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ကွင်းစလန်းပြည်နယ်တွင် နှင်းများ အကြီးအကျယ်ကျဆင်း၊ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထာ?
အမျိုးဘာသာ သာသနာအရေး ဦးဝီရသူအတွက် မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပွဲ မော်လမြိုင်မြို့တွင် ကျင်းပ
ဂိုးများစွာ သွင်းယူပြီး အသင်း၏ ဂန္ထဝင် တစ်ဦးဖြစ်လိုဟု ဟာဇက်ပြောကြား၊ ဟာဇက်၏ အရေးပါမှုကို မက?
ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုပါ ထိခိုက်ဟု KNPP ဆ??
ပီအက်စ်ဂျီနှင့် ပွဲထက် ဖူလ်ဟမ်နှင့်ပွဲကို ဦးစွာ အာရုံစိုက်ရန် ဟာရဲရား တိုက်တွန်း